Dawlada Hindiya oo lagu eedeeyay inay bartilmaameedsadaan jila... | Universal Somali TV
Dawlada Hindiya oo lagu eedeeyay inay bartilmaameedsadaan jilayaasha muslimka
December 28 2016 13:39:13
Xisbiga talada haya ee dalka Hindiya Bharatiya Janata ayaa lagu eedeeyay inay wadaan olole online ah oo lagu bartilmaameedsanayo xiddiga Bollywoodka Aamir Khan ka dib hadalkii sanadkii hore kasoo yeeray ee uu kaga hadlay dhibaatooyinka Hindiya ka taagan ee arimaha diimaha, siyaasada, dhaqaalaha, iyo bulshada, sida laga soo xigtay sargaal hore oo ka tirsaneed BJP's IT Cell.
Khan ayaa sheegay in uu ka "welwelsanyahay" xaalada sii xumaanaysa ee dalka islamarkaana xaaskiisa ay xitaa soo jeedisay inay ka tagaan dalka.
arinkan ayaa muran xoogan dhaliyay sidoo kalena Bollywood-ka ay ku kala qaybsameen dhibaatada Aamiir Khan soo wajahday iyadoo xitaa dibad bax laga hor sameeyay gurigiisa islamarkaana loo soo jeediyay hanjabaado badan. Khan ayaa sidoo kale la kulmay cadhada kooxaha Hinduga ee xisbiga xagjirka hadalkiisii kaasoo loo arkay inuu ku dhaleeceenayay dawladda Narendra Modi, kaas oo noqday ra'iisal wasaare ka dib markii uu ku hogaamiyay xisbiga BJP guul weyn doorashadii 2014.
Khan, oo 51 jir ah , ayaa markii dambe qaar ka mid shirkadaha waxaa ay joojiyeen xayasiisyadii uu sameen jiray sida Snapdeal, oo ah shirkad xayasiis.
Aamir Khan ayaa ka mid ah xiddigaha ugu waa weyn ee Bollywoodka.
Sadhavi Khosla, oo u shaqaysay kooxda warbaahinta bulshada ee xisbiga BJP intii u dhexeeysay 2013 iyo 2015, ayaa sheegtay in ololaha online ka ee "xaasidnimada iyo xaqiraad" lagu bartilmaameedsado mucaaradka iyo suxufiyiinta magaca leh.
Khan oo sidoo kale laga qaaday masuuliyada Ambasador-nimada olo laha loo yaqaan ("Incredible India") kaasoo dalka hindiya caalamka inteeda kale loogu xayasiisyo marki danbana lagu wareejiyay jilaaga loo yaqaan cali dheere. Dawladda ayaa beenisay in arrintaasi ay la xiriirto hadaladisii islamarkaana qandaraaskiisa uu dhamaaday.
Si kastaba ha ahaatee, Manohar Parrikar, wasiirka difaaca ee Hindiya iyo hoggaamiye sare oo xisbiga BJP, ayaa kasoo jeediyay xaflad dadweynaha ay ku sugnaayeen in Khan la baray cashar.
Khosla ayaa sheegtay in labada Khan - Aamir Khan iyo Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Salman Khan - la eegto marwalba oo ay hadal soo jeediyaan".
"25 sano, Waxaan ku soo koray daawashada filimaanta. ani ahaan waxay ii yihiin halyeey, waa xiddigaha Bollywoodka ugu weyn," ayay tidhi.
"Kadib markii Modi uu xilka la wareegay waxaa si kadis ah u bilawday inay bartilmaameedsadaan jilayaasha Muslimiinta ah ayay tiri."
Kan-xigaMadaxweynaha Romania oo diiday mushar...
Kan-horeRussia: Lavrov oo sheegay inay iska ...
33,284,244 unique visits